May 1, 2020 adminEducationLeave a Comment on DASTUURKA FEDERAALKA SOOMAALIYA PDF
Author: Zulkikazahn Gumuro
Hase yeeshee waxa ay xaaladda cirka isku sii shareertay kadib markii madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu sheegay in dowladda federaalka ay diyaaradii uu la socday “ku xayirtay magaalada Hargaysa”. Qodobka 99aad-Madaxweyne-Ku-Xigeenka Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha.
Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo, shaqada xafiiska laga joojiyo, ama laga qaado xilka, madaxweyne ku-xigeenku wuxuu haynayaa xilka madaxweynimada sida ku xusan qodobka Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga. Qodobka 98aad-Xil-ka-qaadista Madaxweynaha 1 Madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaa xilka looga qaadi karaa oo keliya marka uu ku xadgudbo dastuurka, ku tagri-falo awooda xafiiska ama uu galo khiyaamo qaran.
Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska 2 Madaxweynuhu marka uu dhisayo Golaha Wasiirrada waa in uu tixgeliyaa qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed. Sidoo kale waa in lagu sameeyo asaaska ah ‘ ka qeybgalka buuxa ee dadka’ Qodobkaiyo la tashiga.
Dastuurka kumeel gaarka ah. Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka 1 Madaxweyne ku-xigeenka wuxuu caawiyaa madaxweynaha, wuxuu noqodaa sii hayaha jagada madaxweynaha marka Madaxweynahu dalka uga maqanyahay dibada ama ay ku timaado sabab uu u gudanwaayo xilkiisa.
Waxaa xusid mudan in mooshinka ay hormuud ka yihiin xildhibaano horey dowladda ugu eedeeyey in ay Itoobiya ku wareejisay muwaadin Soomaaliyeed, arrintaas oo markii dambe loo saaray guddi soo baara. Guddiga Xorta ah ee Dastuurka Federaaliga ayaa go,aan ka gaari doona midka saddexdaas arimood la qaadanayo marka sidaa laga maqlo la tashiga dadweynaha.
Dawladda federaalka Soomaaliya – Wikipedia
Lahaanshaha sawirka Madaxtooyada Soomaaliya Image caption Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qaybgalaya caleemo-saarka madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf Murankii ka dhashay moowqifka dowladda federaalka ay ka qaadatay khilaafka dowladaha khaliijka iyo kan ay ka qaateen dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa cirka isku sii shareeraya, markastana waxaa kasoo kordhaya wax cusub oo arrimaha sii murjinaya.
Markii ugu dambeysay ee Puntland ay go’aan mid kaa la mid ah qaadatana waxa ay ahayd dii bishii Luuliyo, kii, xilligaas oo uu khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynihii hore, Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulka Puntland. In other projects Wikimedia Commons. Guddiga Xorta ah ee Dastuurka Federaaliga wuxuu bixinayaa saddex ikhtiyaar oo la kala dooran karo: Soomaaliya Waxay leedahay Baasaboor Elektaroonik ah inkastoo kaydka macluumaadka ama Serverka kaydiya Macluumaadka uu yaalo Imaaraatka Carabta Wali Awood uma helin laanta Socdaalka in ay usoo wareejiso Soomaaliya.
Xisbiyada siyaasadda Xiriirka Dibadda Baasaboor. Qodobka aad-Golaha Wasiirada 1 Madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa Gole Wasaaradeed aan ka badnayn 23 xubnood oo ay ku jiraan Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenku kuwaa oo aan ka mid aheyn xubnaha labada aqal.
Waxaase xaalka uga sii daraya in aysan jirin meel lagu kala boxo, sida maxkamad dastuuri ah oo aanan wali dhisnayn, taas oo go’aan ka gaari lahayd arrimaha ceynkan oo kale ah oo la’isku qabsado.
Waxaa dhacday hadda ka hor in nin Hindi ah oo Deganaasho ku leh Dubay iyo Nayroobi uu sameeyo Baasabooro Soomaali ah taasoo fadeexad ku noqotay Laanta socdaalka Soomaaliya.
Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda. Haddii uusan jirin madaxweyne-ku-xigeen ama madaxweyne-ku-xigeenku uusan awoodin in uu qabto xilka, afhayeenka Golaha Shacabka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha. Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha.
Soomaaliya Waxay leedahay laba xarun ee warfaafineed ee ku hadla Afka Dawladda Radio Muqdisho ito Telefishinka Qaranka Soomaaliyeedwaxaa kaloo jira Saxaafad madax badaan oo badankood ku hadla Afka Beelahood. Qodobadaan waa kuwa ka mid ah Tixda: Kadib markii lasoo xulay Xubnaha Baarlamaanka Ayeey waxay doorteen Gudoomiyaha Baarlamaanka ama Afhayeen, waxay markale duurteen Madaxweyne oo isgana sii xushay Raiisul wasaare, Sidaas ay dawladdu ku tahay Baarlamaani oo wax walba Baarlamaanka ayaa soo go’aaminaya.
Xildhibaanada mooshinka gudbiyay waxay safiirka UAE ku eedeeyeen inuu dawladda u gacan dhaafayo arrimaha maamul goboleedyada. Ma jiro wax bixin ama tilaabo la qaadayo hadii wax u dhacaan sida sidaan caksiga ku ah ma jiraan wax tilaabo ah oo dowlad goboleedku qaadi karto markii dowlada federaalka ahi dabacsan tahay ama u dhaqmeyso si lidi ku ah dastuurka.
Isfaham darada mararka qaar soo kala dhexgasha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waa mid aad u qoto dheer oo soo jiitamayay muddo dheer. Waxaa loo qaateen ah in macnaha laga wado Djibouti iyo datuurka looga hadlo af Soomaaliga ee wadamada jaarka ah.
Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka mid ah kuwa mooshinka gudbiyay ayaa sheegay: Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub.
Markii hore arrinta ddastuurka ay ku ekeyd kala aragti duwanaan oo kaliya, balse hadda waxa ay u egtahay in uu u tilaabay khilaaf rasmi ah oo ragaadinaya soomqaliya dowladeed ee Soomaaliya oo markii hore ku jiray xaalad dib usoo kabasho.
Madaxweynihii dhawaanta xilka laga daztuurka ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo wali ku adkaysanaya in uu skomaaliya madaxweyne ayaa hoggaanka dowladda federaalka ku eedeeyay in ay ka dambeeyeen in isaga xilka federaallka qaado. Haddii musharraxa somoaaliya soo jeediyo xisbi, magacaabistiisu waa in ay taageeraan ugu yaraan hal laan oo ka mid laamaha xisbiga ee ku yaalla dawlad-goboleed kasta. Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub.
Mooshinka xildhibaanada ayaa ka dambeeyay kadib markii qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ay sheegeen in dowladda ay qaadato go’aan ay ku taageereyso isbeheysiga Sucuudiga ee go’doominta ku haya dalka Qadar.
Sida muuqata, maamul goboleedyadana ku doodayaan, isfaham darada ugu badan waxa ay salka ku haysaa dastuurka oo ay sheegayaan in uusan kala qeexeyn awoodaha.
Imaaraadka oo rajo xumo ka muujiyay xal u helidda khilaafka Khaliijka. Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa 1 Musharraxa Madaxweynenimada ama ku-Xigeenka Madaxweynaha waxaa soo jeedin karaa xisbiyada siyaasadeed ama wuxuu noqon karaa Musharrax madax-bannaan. Ciidamada Soomaaliya waxay ahaayeen ciidanka ugu xoogan qaarada afrika Afrikada Madoowmarka laga eego Baaxadiisa adstuurka lacagta ku bixi jirtay iyo qalabka uu watay.
Waxaanu doonaynaa in xiriirka la hagaajiyo”, ayuu yiri xildhibaan Sooomaaliya. Dood kaddib haddii hindisaha sharciyeed ay oggolaadaan saddex dalool laba dalool mudanayaasha Golaha Shacbigu, waa in hindisaha sharci loo gudbiyaa Aqalka Wakiilada dowlad-goboleeddada. Eeg Shuruudaha adeegsiga ee faahfaahinta. Inkasta oo laga yaabo in markii horeba xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar uu ahaa mid ul booc ah ku kutubayay, haddana murankan ka dhashay arrimaha khaliijka ayaa u muuqda in uu wax wayn u dhimayo rajo kasta oo laga qabay in xaaladda soo hagaagto.
Cutubka 16aad – Qodobbada Guud. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa madaxa Qaranka iyo xukuumadda, waana astaanta midnimada Qaranka. Qodob kale oo Aqoon Guud ah. Qormadan tii ka horeysay ee ay BBC-da ka qortay arrintan ayaa waxa ay ku sheegnay in ay jirto saansaan ah in muranka laga yaabo in uu u talaabo baarlamaanka.
Qodobka aad-Habka Iscasilaadda Madaxweynaha. Marka waa in ay noola dhaqanto qaab dowladeed, ee aysan noola dasuturka sida qabaa’il iska firirsan oo aan dowlad dhexe lahayn”, ayuu yiri xildhibaan Zakariye oo BBC-da la hadlay.
Xaaf ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay in ay faragalin qaawan ku hayso maamulka Galmudug, wuxuuna yiri “Waxaan reer Galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada iyo dowladaha caalamka iyo UN-ka ogeysiinayaa arrinta faragelinta ah ee dowladda federaalka nagu hayso in ay dastuurak dhabar jab reer Galmudug ka dhan ah”.
Nidaamka Federaaliga iyo Qaranimada Soomaaliya 7 Sebtembar Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha.